Tilmaamaha maskaxda lagu hayo marka la rinjiyeeynayo gaariga | Ragga Stylish
Waa daqiiqad in ku dhow qof kasta oo baabuur leh uu dhex maro. Arimaha deegaanka, talaabada taraafikada ama waxyaalo kale oo aan la saadaalin karin, waxay u keeni karaan “dhaawacyo” shaqada jirka.
Waa in rinjiga ku rinji gaariga si aad u saxdid xoqitaannada, dusha ama dusha waxay noqoneysaa lagama maarmaan.
1 Sidee loo doortaa aqoon isweydaarsiga si loo rinjiyo gaariga?
1.1 Samee xulasho hore
1.2 Ha yareynin su'aalaha
1.3 Ha ku joogin oo keliya qiimaha
1.4 Hubso inay ka saaraan dhammaan rinjiga hore
1.5 Wuxuu ubaahan yahay miisaaniyad xiran
Sidee loo doortaa aqoon isweydaarsiga si loo rinjiyo gaariga?
Tilmaamaha qaarkood ayaa naga caawin doona inaan sameyno xulashada saxda ah.
Samee xulasho hore
Waxaad awoodi kartaa weydii reerka iyo asxaabta. Aad uma badna inaad noqotid qofkii ugu horreeyay deegaankaaga si aad u hesho baahida loo qabo helitaanka meel lagu rinjiyeeyo gaariga.
Qof khibrad u leh rinjiyeynta gaariga, ayaa kugula talin doona meel fiican oo la aado. Waxay sidoo kale noo sheegi karaan halka aan habooneyn in la aado.
Internetku waa habka kale. Raadintaada dalwaddii, dib u eegista faallooyinka macaamiisha aqoon-isweydaarsiga ayaa ku siin doona fikrad aad isugu dhow tayada shaqada.
Ha yareynin su'aalaha
Booqo dhammaan goobaha ku yaal liiskaaga hordhaca ah iyo weydii faahfaahinta mid kasta oo ka mid ah geeddi-socodka.
Qaado waqti aad u aragto inay lagama maarmaan u tahay inaad go'aansato. Xaqiiqdii dhowr ka mid ah aqoon isweydaarsiyada aad booqato waxay rabaan inay ku cadaadiyaan si aad si deg deg ah uga samaysan karto maskaxdaada.
Ha ku joogin oo keliya qiimaha
Tani sidoo kale macnaheedu maahan qaadashada xulashada ugu qaalisan daruuri noqo dammaanad tayo sare leh. Si kastaba xaalku ha ahaadee, isku day inaadan iloobin oraahdii hore ee caanka ahayd: “jaban aakhirka marwalba wuu ka qaalisan yahay".
Hubso inay ka saaraan dhammaan rinjiga hore
Haddii socdaalkaaga aad ogaato aqoon isweydaarsi aan ka mid ahayn jidhka ka saar rinjiga duugga ah ee baabuurka, isla markiiba iska tuur.
Wuxuu ubaahan yahay miisaaniyad xiran
Markaad gelineyso rinjiga gaarigaaga gacmaha shirkad, waa inaad qoraal ahaan in adeegga lagugu siiyay aan lagu sameyn doonin wax ka beddel nooc kasta ah. Sinnaba uma ogolaatid inaad qirato jumlado ama mala awaal ah "kharashaad dhaca".
Haddii ay tahay shirkad halis ah, oo leh qiimeynta ay ku sameynayaan gaariga ka hor inta aysan soo saarin qiyaasta Waxay mar hore awoodi doonaan inay go'aamiyaan xaddiga saxda ah ee maalgashigaaga.
Ilaha sawirka: www.pintar-coche-madrid.es / carandcar.es
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » motor » Tilmaamaha rinjiyeynta gaariga
Kaararka fudud ee fudud, waa gabal la safeeyey waqtiga badhkii